Mhedzisiro yeOnline Ongororo | Martech Zone
Chishanu, April 27, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Isu tichangotanga kushanda naAngie's Chinyorwa uye zvave kutovhura maziso kwatiri kuti mangani mabhizinesi anowana anotungamira kuburikidza neawo ratings, wongororo uye madhiri. Kune emabhizinesi emuno anopa vatengi vavo basa rakakura, wongororo dzakabhadharwa paAngie's Chinyorwa imari yakachena.
Sekureva kweDiki Bhizinesi Kutsvaga Kushambadzira Ongororo neAmerican Express OPEN, mabhizimusi madiki eUS anogona kutarisira kutaura-kwemuromo senzira yepamusoro yekuti vatengi vazviwane. Ipedyo kumashure, zvakadaro, iInternet. Vatengi vemuno izvozvi vanovimba zvakanyanya nesimba reinjini yekutsvaga kana vachitenga munzvimbo. Isu tinotarisa kuti izvi zvinorevei kune rako bhizinesi diki.
Milo, ane online chigadzirwa locator, yaisa iyi infographic pamwechete ichitaura kune simba reongororo dzepamhepo.
Tags: Chinyorwa chaAngiebhizinesi rekugaramiloOngororo dzepamhepoReviews
Sei Usinga Zive Kuti Ndini Ani?